Maitiro eKudyisa Yako WordPress Blog Zvinyorwa NeTag Mune Yako ActiveCampaign Template | Martech Zone
Tiri kushanda mukugadzirisa dzimwe nzendo dzeemail dzemutengi dzinosimudzira mhando dzakawanda dzezvigadzirwa pavari WordPress site. Imwe neimwe ye ActiveCampaign email matemplate atiri kuvaka akagadziridzwa zvakanyanya kune chigadzirwa chaari kusimudzira nekupa zvirimo pachiri.
Panzvimbo pekunyorazve zvakawanda zvemukati zvakatogadzirwa zvakanaka uye zvakarongwa paWordPress saiti, isu takabatanidza bhurogi ravo mumatemplate avo eemail. Nekudaro, bhurogi ravo rinotenderedza zvigadzirwa zvakawanda saka taifanira kusefa chikafu cheimwe neimwe yematemplate nekubatanidza mablog mameseji akaiswa nechigadzirwa.
Izvi zvinoratidza kukosha kwe kutaga zvinyorwa zvako! Nekumaka zvinyorwa zvako, zviri nyore kubvunza uye kubatanidza zvirimo kune mamwe mapuratifomu senge email.
Yako WordPress Tag Feed
Kana iwe wanga usingazvizivi nechekare, WordPress ine inoshamisa yakasimba yekudyisa system. Iwe unogona kufunga kuti saiti yako inogumira kune yako imwechete blog feed. Hazvisi… unogona kugadzira zviri nyore chikamu-chakavakirwa kana kunyangwe tag-chakavakirwa mafeed esaiti yako. Mutengi wedu mumuenzaniso uyu Royal Spa, uye matemplate maviri akagadzirwa ndee Hot Tub uye nokuda Float Tanks.
Zvavo zvebhurogi hazvina kuiswa mumhando yechigadzirwa, saka takashandisa ma tag pachinzvimbo. Iyo permalink nzira yekuwana yako feed ndeye yako blog URL inoteverwa neiyo slug tag uye yako chaiyo tag. Saka, kune Royal Spa:
Royal Spa Zvinyorwa Tagged zveHot Tubs: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/
Royal Spa Zvinyorwa Tagged for Float Tank: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/
Kuti uwane iyo Really Simple Syndication (RSS) chikafu kune imwe neimwe yeiyo, unogona kungowedzera / feed kune iyo URL:
Royal Spa Zvinyorwa Tagged zveHot Tubs: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/feed/
Royal Spa Zvinyorwa Tagged for Float Tank: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/feed/
Iwe unogona zvakare kuita izvi ne querystring:
Royal Spa Zvinyorwa Tagged kune Anopisa Tubs: https://www.royalspa.com/blog/?tag=matabhu anopisa&feed=rss2
Royal Spa Zvinyorwa Tagged for Float Tanks: https://www.royalspa.com/blog/?tag=float-tank&feed=rss2
Unogona kubvunza akawanda ma tag nenzira iyi:
Royal Spa Zvinyorwa Tagged for Float Tangi uye Anopisa Tubs: https://www.royalspa.com/blog/?tag=float-tank,hot-tub&feed=rss2
Kana uri kushandisa zvikamu, unogona kushandisa chikamu slugs (kusanganisira subcategory) pamwe nema tag... heino muenzaniso:
Iwe unogona kuona kuti nei izvi zvichibatsira zvakanyanya sezvaunodzosera zvemukati kune mamwe masvikiro. Isu tinokurudzira vatengi vedu vese kuti vaise zvinyorwa zvavo mumapepanhau avo, maemail ekushambadza, uye kunyangwe maemail avo ekutengeserana. Izvo zvekuwedzera zvinogona kupfumisa email yavo, iine akati wandei mabhenefiti:
Vamwe vanopa mailbox ' inbox placement algorithms tenda zvimwe zvinyorwa mumaemail.
Zvinyorwa zvekuwedzera zvinoenderana nemusoro wenyaya, kuwedzera kubatanidzwa nevanyoreri vako.
Kunyange zvingasatungamira vanyoreri vako kukudanwa-ku-chiito uye chinangwa chekutanga cheemail yako, inogona kupa humwe kukosha uye kuderedza munyoreri wako churn.
Iwe wakaisa mari mune izvo zvemukati, saka wadii kuzvishandisa zvakare kuwedzera kudzoka kwayo pakudyara?
Wedzera RSS Feed kuActiveCampaign
MuActiveCampaign, zviri nyore kuwedzera RSS Feed:
Vhura ActiveCampaign uye famba uchienda Mishandirapamwe > Manage Matemplate.
Vhura template iripo (nekudzvanya pairi), Ngenisa Template, kana kuti tinya Gadzira A Template.
Imwe yekurudyi menyu, sarudza Isa > Zvivharo > RSS Feed.
Izvi zvinovhura iyo RSS Feed Builder hwindo kwaunogona kuisa yako Feed kero uye tarisa iyo feed:
Gadzirisa yako RSS Feed. Muchiitiko ichi, ini ndinongoda zita rakareruka rakabatana uye tsananguro pfupi:
Iwe zvino uchaona iyo Dyisa mune yako Email template, kwaunogona kugadzirisa marongerwo sezvaunoda.
Chikamu chakanakisa cheiyi nzira ndechekuti hapana chikonzero chekudzokorodza zvinyorwa mumaemail uye nzendo paunenge uchienderera mberi nekuburitsa zvitsva pablog rako.
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we ActiveCampaign uye femu yangu inobatsira vatengi vane advanced WordPress kusimudzira, kubatanidzwa, uye kushambadzira otomatiki zano uye kuuraya. Tibate pa Highbridge.
Tags: ActiveCampaignblog tagschikamu chikafucustom feedEmail Marketingchikafuchaizvoizvo nyore syndicationroyal spaRSSrss feedrss feed mugadzirirss kuemailSyndicationtag feedtaggingWordPressWordpress chikafuwordpress tag feed